Dowladda Itoobiya oo ku dhawaaqday in xabsiyada ay ka sii deysay dad ay ku sheegtay illaa 2,000 oo Maxbuus – Xeernews24
31. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
October 31 (XeerNews24)
Ciidamada ammaanka Itoobiya ayaa xabsiga ka sii daayey ila 2,000 oo Maxbuus, kuwaasoo la xidhay inta lagu guda jiray markii dowladda ku dhawaaqday xukunka deg deg ah, iyadoo dadkan lagu soo eedeeyay inay qayb ka ahaayeen rabshadaha ka socda qaybo ka mid ah dalka.
Wasiirka Difaaca Itoobiya Siraj Fegessa ayaa bixiyay amarka lagu sii daayay dadkan, kaddib markii ay ka waantoobeen dhibaatadii ay wadeen.
Sidoo kale Wasiirka ma sheegin tirada dad ee wali ku xidhan xabsiyada Itoobiya, hase ahaatee tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid ka dhalatay cadaadiska dowladda uga imaanaya Hey’adaha xuquuqda aadanaha.
20-kii October ayaa ciidamada ammaanka Itoobiya xabsiga dhigeen in ka badan 2,600 oo ruux, kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan qaybo ka mid ah dalka.
Dowladda Itoobiya ayaa 9-kii bishii October ku dhawaaqday xukun deg deg ah oo soconaya muddo lix bilood ah, kaddib markii uu sii xoogeystay dibad baxyada ka dhanka ah dowladda.
Kooxaha Mucaaradka ayaa dalbanaya in la siiyo xoriyad dhinaca siyaasada, iyadoo xukunka dalka ay hayaan Xisbiga EPRDF oo ka talinayay tan iyo sanadkii 1991.
Qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromada ayaa ku eedeynaya in awooda dalka ay gacanta u gashay koox yar oo ka tirsan qowmiyada Tigreega, isla markaana laga gacan bidxeeyay adeegyadii dowladda ee ay u baahnaayeen.
Hey’addaha Xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in illaa 500 ruux ay ku dhinteen rabshadaha lagaga soo horjeeday dowladda Itoobiya.
Maxaa kasoo baxay Kulamadii Madaxda Imaaraadka iyo Madaxda Maamul goboleedyada... Reer Godey iyo siday uga hadleen Saylac oo Noqotay Hilib Cidla yaal